“Iskaandar” Gantaalka Ruushka ee Cabsida Ku Abuuray Mareykanka…Sabab? | Xaqiiqonews
“Iskaandar” Gantaalka Ruushka ee Cabsida Ku Abuuray Mareykanka…Sabab?
Hubkani oo lagu magacaabo “Iskandar” waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah bubabka aduunka uga halista badan, sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta.
Nidaamka gantaalaha taatikada ee lagu magacaabo “Iskander” ayaa badalay gantaalihii “Osa” ee ciidanka Ruushka isticmaali jiray Xilligii Midowgii Soofiyeeti, Ruushku waxa uu horay u baabi’yey gantaalaha Osa si uu u qanciyo Mareykanka oo ka baqay gantaalahan gaari kara 400-kiilo mitir.
Gantaalka Iskander ayaa noqday badal guuleystay oo looga maarmay gantaalkii Osa, madaama uu yahay hubka ugu halista badan Ruushka, sida ay qortay warbaahinta “National Interst”.
Xitaa waxa intaasi ka sii khatarsan -sida ay qabaan khabiirada milatariga-ayaa ah in nidaamka Iskander uu yahay mid aqbalaaya casriyeynta, taasoo la macno ah in la si fudud loo samey karo gantaallo cusub, oo ka khatar badan, kuwaasi oo dusi kara difaacyada hawada.